Xarunta Daaweynta Kansarka Proton Radiation Therapy - California Proton
Haddii lagugu ogaado markii ugu horeysay, ama aad la kulanto kansar soo noqnoqda, daaweynta proton waxay noqon kartaa xulashadaada ugu fiican iyada oo ah mid ka mid ah daaweynta kansarka ugu badbaado badan uguna waxtarka badan.
Daaweynta 'Proton therapy' waa kaar aad u yar faafa, waxaa lagu taliyaa noocyo badan oo kansar ah oo taariikh ahaan lagu daaweyn jiray hababka dhaqameed sida qalliinka, kiimikada ku daaweynta iyo shucaaca raajada. Waxay ku taalaa San Diego, Xarunta Caafimaadka Kansarka Kansarka ee Protons waxay safka hore kaga jirtaa daryeelka caafimaadka, cilmi baarista iyo bayoolaji. In ka badan 50 sano oo waayo-aragnimo isku dhafan ah oo proton ah, dhakhaatiirta caanka ah ee caalimkeenna ah ayaa kabaya daaweynta daweynta kacaanka kansarka iyo aaladaha lagu daaweeyo kansarka caadiga ah iyo kuwa naadirkaba.
Daweynta Shucaaca Tumor
Si sax ah ayaa loo gaarsiiyay gudaha 2 milimitir, teknoolojiyadda baarista qalin-qotodheer ee qaab-dhismeedka moodeelka ah, ee lagu bixiyo dhammaan shanta qol ee daaweyn, waxay siidaayaan xaddi sare oo shucaaca dilaaga kansarka kaasoo si sax ah ula jaan qaada qaabka gaarka ah iyo cabbirka burada. Tikniyoolajiyaddan aadka loo bartilmaameedsaday waxay ku weerartaa burooyinka iyada oo la adeegsanayo saxsanaanta loo yaqaan 'laser-like', iyadoo ay ku sii faafayaan unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha.
Xarunta Daaweynta Kansarka ee San Diego
Hoyga mid ka mid ah kooxaha ugu khibrad badan adduunka ee shucaaca kansarka ee ku yaal goobta daaweynta daaweynta proton, dhakhaatiirtayada ayaa si caalami ah loo aqoonsan yahay oo ay raadinayaan bukaanada adduunka oo dhan. Xaqiiqdii, agaasimaheena caafimaadka ayaa si shaqsi ah u daweeyay in kabadan 10,000 kiisaska kansarka qanjidhka kaadi mareenka — waana in kabadan qofkasta oo aduunka jooga.
Waxbadan ka baro xaruntayada daaweynta kansarka.
Xarunta Daaweynta Kansarka
Laga soo bilaabo dhakhaatiirtayada ilaa adeegyada isku xidhka ilaa barnaamijyada taakuleynta, waxaan ku bixinaa heerka ugu sareeya ee daryeelka bukaanka la gaaryeelay xaruntayada daaweynta kansarka. Shaqaalaheena oo dhami waxay u heellan yihiin qof walba la dagaalankiisa kansarka maalin walbana waxaan ku dadaalaynaa inaan abuurno jawi bukaankeena, qoysaskooda iyo saaxiibadoodba ay dareemayaan soo dhaweyn bulsho ka buuxo saaxiibtinimo, dad waxtar leh oo ula dhaqma qof walba sida ay ula dhaqmi lahaayeen xubnaha qoyskooda.
Xaq ma ii tahay?
Daaweynta shucaaca Proton waxaa loo isticmaali karaa si khaas ah, ama lagu daro qalliinka iyo daaweynta kiimikada, si loogu daaweeyo noocyo badan oo kansar iyo burooyin ah, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
Burooyinka Maskaxda & Maskaxda
Shucaaca caadiga ah ee R-Ray
Shucaaca caadiga ah iyo daaweynta proton waa labada nooc “shucaaca banaanka” shucaaca. Si kastaba ha noqotee, astaamaha midba midka kale aad ayuu u kala duwan yahay waxayna dhalisaa heerar kala duwan oo shucaaca ka soo baxa goobta buro iyo unugyada iyo xubnaha ku xeeran.
Baloog ku saabsan rajada, bogsiinta iyo awoodda looga adkaado. Read More